janvier 2021 – Madatopinfo
Velirano laharana fahadimy an’ny Kaominina Antananarivo renivohitra (CUA) ny fametrahana ny toerana ho an’ny tanora ahafahana mampiroborobo ny fanatanjahantena. Ho fanatrarana izany dia misy ny fiaraha-miasa eo amin’ny Fondation Axian
Maro ny tanora no manana mari-pahaizana sy mivoaka amin’ireny sekoly ambony ireny isan-taona. Olana ho azy ireny anefa ny fitadiavana asa sahaza ny diplaomany aty aoriana. Nanampy trotraka ihany koa
“Indro havaoziko ny zavatra rehetra!”. Io no mahalaza ny fanamboarana tanteraka hatrany ifotony indray ny trano fivarotana hani-masaka eo Ambodifilao. Araka ny fampitam-baovaon’ny tomponandraikitra mpanangana indray an’ny Zaimaika Analakely, na